Ny Fitomboana Mampivarahontsan’ny Ny Fakàna Zaza An-keriny Ho Toy Ny Asa Fitadiavam-bola Ao Madagasikara Ny Taona 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2016 2:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, 日本語, English
Fahantrana raiki-tampisaka sy tsy fandriampahalemana no mahazo ny olompirenena Malagasy maro miady mba hahita hoavy mamiratra kokoa ho an'ny firenena. Eo amin'ny zavamisy ara-toe-karena ankehitriny, mpanao heloka bevava vitsivitsy no niditra amin'nà fomba iray mamohehatra hivelomana: fakàna zaza an-keriny.
Niainan'i Madagasikana ny fitomboana tampoky ny fakàna ankeriny narahana fitakiam-bola tato anatin'ny roa taona nisesy izay. Mameno ny vovonana sy ny bilaogy Malagasy ireo fijoroana vavolombelona mahalotika
Ity ny tantaran'i Annie sy Arnaud, araka ny voalazan'i B. Nguma, mponina ao Toamasina, Madagasikara, teo amin'ny bilaogy Housseina Writing :
Nanjary tranga iray iraisam-pirenena ny fitomboan'ny fakàna zaza ankeriny ao Madagasikara. Ny ambasadaoro Frantsay taloha, François Goldblatt nilaza fa nanome ny lisitry ny olona nahiahiany ho tafiditra tao anatin'ny trafikanà ankizy, ho an'ny Masoivoho frantsay. Tatitra maro no manambara fa votsotra herinandro maro aty aoriana ireo mpaka ankeriny talohan'ilay fakàna zaza ankeriny vao haingana, manantintrantitra ny tsy maha ara-dalàna ny rafi-pitsarana ao Madagasikara.
Zaza roa hafa no nisy naka ankeriny andro vitsivitsy taorian'ny nakàna ankeriny an'i Annie sy Arnaud. Tao anatin'ireo vaovao mifandraika amin'izany, jeneraly iray sy miaramila telo no voasambotra vao haingana mikasika ny fakàna ankeriny tao amin'ny fianakaviana teratany Sinoa iray tomponà fivarotana.
Ahitan-doza ny mitondra zazakely mivoaka ny trano na dia handeha ho eo amin'ny mpivarotra entamadinika akaiky eo aza. Ray amandreny aho ary matahotra aho ankehitriny mikasika ny fiarovana ireo zanako. Ary tsy izaho irery. Tao anatin'ny andro vitsivitsy izay, andiana fakàna zaza ankeriny no natrehina tany amin'ireo tanàn-dehibe teto Madagasikara. Inona no tohin'ilay raharaha mikasika ilay zaza 6 taona notapahan-doha? Tena nampihorinkoditra ahy ity tantara ity. Tsy iriko, na ho an'iza na ho an'iza aho, eny fa na dia ho an'ny fahavaloko aza, hiaina amin'izany nofy ratsy izany. Miravirary tanana ny vahoaka malagasy manoloana io andiana fakàna zaza ankeriny io. Etsy andaniny, toa ohatran'ny tsy misy lanjany amin'ny mpitandro ny filaminana izany. Mbola ratsy koa, araka ny loharanom-baovao amin'ny teny gasy, misy tsy miraharaha akory ireo fitarainana napetraka ireo tomponandraikitry ny mpitandro filaminana.
Nitranga tao Ambatolampy, tanàna iray manodidina ny renivohitr'Antananarivo, tamin'ny volana jona teo, ny raharaha mikasika ny fanapahan-doha ilay zazakely 6 taona. Hita ho nitaingina fiarakaretsaka iray niaraka tamin'olona tsy fantatra ilay zaza izay nanambiamby azy tamin'ny vatomamy. Tsy mbola fantatra izay antony nahatonga ny famonoana.
Ireo faritra sasany, sahala amin'ny faritr'i Sava any amin'ny faritra avaratr'i Madagasikara, ohatran'ny toa tsy voaaro manoloana ny heloka bevava toy izany. Matetika mikendry ireo vitsy an'isa mpanankarena hafa fihaviana ireo jiolahy. Ny fangataham-bola dia manomboka amin'ny 40.000 euros ka hatramin'ny iray tapitrisa mahery, miankina amin'ny fianakavian'ilay niharam-boina.